X-Plane Los Angeles Fire Department AW139 1.0
Fikarohana X-Fiaramanidina Laminar
Fikarohana momba ny laminera X-fiaramanidina 11
X-Plane 11 Fiaramanidina hafa
Fampidinana: 7,072 alaina 967,012 fotoana.
X-Plane Los Angeles Fire Department AW139 1.0. Ity dia fananan'ny Departemantan'ny afo any Los Angeles ho an'ny X-Rotors AW139. Ny Sampan-draharahan'ny afo any Los Angeles (LAFD / LA City Fire) dia manome serivisy fitsaboana maika, famonoana afo, fisorohana ny afo, famoretana ny afo, fanalefahana ireo fitaovana mampidi-doza ary serivisy famonjena any an-tanànan'i Los Angeles, Kalifornia, Etazonia. Ny Sampan-draharahan'ny afo any Los Angeles natsangana tamin'ny taona 1886 dia iray amin'ireo sampana mpamono afo lehibe indrindra any Etazonia, aorian'ny Sampana mpamono afo any New York sy ny Sampan-draharahan'ny afo any Chicago. Repained in Gimp 2.8 amin'ny fampiasana firafitra sary. Nosoratan'i Paul Mort.
Noforonina Alakamisy, 25 Febroary 2021 03: 23
Anaran'ny fisie la_county_fire_n160la.zip
Airplane Heaven Previews AS1000 sy AS3x Units
Airplane Heaven dia nizara sary topy maso momba ny singa AS1000 sy AS3x hita ao amin'ny Mustang ho avy ho an'ny MSFS: manomboka izahay, raha mbola azo atao, ny asa riveting an'ny ... riveting the Mustang. Ka ireto ny fizarana WW2 AS1000 sy AS3x. Safidy tanteraka, AS3x dia hanana autopilot miasa (fampiasa amin'ny stock), ny AS1000 dia singa lehibe iray ka tsy hanana ny autopilot (ampiasaina amin'ny fiaramanidina klasika lehibe kokoa izay hanana AP). Ary eny manana zavatra hafa isika ...
VSKYLABS Fanavaozana ao amin'ny Aeroprakt A22-LS Project XP
Ny Tetikasa VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ho an'ny X-Plane nataon'i Laminar Research (ho avy tsy ho ela!). Ny varavarankely famotsorana dia napetraka tamin'ny herinandro farany tamin'ny volana aprily 2021, raha toa ka efa nandrasana avokoa! Ireto misy sary nalaina sary vitsivitsy mampiseho ny famoahana farany ny tetikasa mivoatra. Kit-kitay mifanentana sy mora ampiasaina dia eo am-panomanana ary ho tafiditra ao anatin'ilay tetikasa! Ny Tetikasa VSKYLABS Aeroprakt A22-LS dia noforonina ary novolavolaina niaraka tamin'ny boky torolàlana tena-A22 / POH izay iray amin'ireo fitaovana enti-miasa fototra. Io dia ahafahan'ny ...
Navoaka ho an'ny MSFS ny Delta Heritage Airpark
CFSS (CanadianFlightSimStudios) dia nanambara ny famoahana ny Delta Heritage Airpark tao Vancouver ho an'ny MSFS 2020. Ity seranam-piaramanidina tokana ity dia misy làlambe ahitra, trano fisakafoanana ao Mary's Place, trano fanamboarana fiaramanidina ary fivarotana famerenana amin'ny laoniny, ary antsipiriany maro hafa hikatsahana sy hitadiavana. Hiaina ny tany mahafinaritra Vancouver ambany sy ny Pacific Northwest any Microsoft Flight Simulator 2020! Miaraka amin'ny antsipiriany napetraka tanana sy maodely vita kanto, miaina ny fahitana mahafinaritra an'i Vancouver, ...
DCS Previews F / A-18C Radar Modes
DCS: F / A-18C Hornet mode radara vaovao: Amin'ny fanavaozana lehibe manaraka ho an'ny Hornet, dia hanampy maody radar roa vaovao izahay: Wide Auto-Acquicit (WACQ) sy SPOT. Ny maody WACQ dia manana azamuth 6-bar, 30-degre (60-degre total) azimuth amin'ny 10 nm isan-karazany ary maody tsy voafindra ahafahan'ny TDC mamono ny foibem-pikarohana miorina amin'ny habakabaka. Ny maody SPOT dia ahafahanao manondro toerana ao anatin'ny faritra taktika an'ny fampisehoana radarin'ny rivotra sy ny depress ary mitazona ny TDC hanombohana fikarohana 22 degre mifototra amin'ny ...
Fanavaozana ny tranokala faha-21 HJG
Fanavaozana ny tranokala HJG "Anniversite lehibe indrindra & faha-21". Ny HJG (Groupe Jetliners manan-tantara) dia faly nanambara ny famoahana azy voalohany ho an'ny taona 2021 sy ny fanavaozana ny tranokala "BIGGEST EVER" .... miaraka amin'ny fankalazana ny faha-21 taonan'ireo vondrona. Tsingerintaona faha-21 an'i HJG 2000-2021 Ity fanavaozana ny tranokala HJG farany ity dia fankalazana ny vondrona nandalo ity fanilo manamarika ny vanim-potoana ity .... noforonina tamin'ny firafitra "NEW" 163 ho an'ny B707, B717-200, B727, B737 , C-135, ...
BushtalkRadio / BushtalkClient ho an'ny MSFS
Efa nilavo lefona amin'ny drafi-pizahanao amin'ny ho avy azo jerena mialoha? Tongava mpizahatany virtoaly amin'ity add-on maimaimpoana ity ho an'ny MSFS2020! Tetezao izao tontolo izao eo am-pihainoana fitsangatsanganana amina feo an'arivony avy amin'ny fiononan'ny kokotranao. Bushtalk Radio dia tetik'asa tarihan'ny fiarahamonina miaraka amin'ny tanjona hameno ny tontolon'ny MSFS amin'ny marika marobe mahaliana an'arivony sy POI. Ny tsangambato tsirairay dia hanana fitsangatsanganana am-peo rehefa manakaiky azy ianao. Manana fitsidihana am-peo ho an'ny POI lalao rehetra izahay (ao anatin'izany ny Fanavaozana Manerantany ho an'ny ...
Mahafantatra an'i Afrika ny vondrona fiaramanidina manan-tantara
Betsaka ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka virtoaly manarona ny indostrian'ny fiaramanidina, saingy vitsy raha toa ka misy mahavita miatrika an'i Afrika mihoatra ny sidina vitsivitsy. Eto amin'ny Vondron'orinasa manan-tantara dia nahatsapa izahay fa mila misolo tena kokoa ny sidina afrikana amin'ny fomba lehibe. Vao nanisy sidina 500 izahay, misolo tena ireo mpitatitra afrikanina fito, na iraisam-pirenena izany na isam-paritra. Ireo sidina ireo dia taratry ny sidina manan-tantara ao Afrika nanomboka ny taona 1950 ka hatramin'ny 1980. Airways atsinanana atsinanana: kometa DH106, Vickers VC-10 lava ary ...
Orbx dia nanambara ny sarintany momba ny làlana 2021
Tao amin'ny pejin-kevitr'izy ireo, Orbx dia nanolotra tondrozotra ho an'ireo vokatra marobe ho avy. Ahitana fonosana ao an-tanàna, faritra, seranam-piaramanidina ary koa ny fiaramanidina: Tsapanay fa tsy nanambara nandritra ny fotoana kelikely ny sori-dàlana momba ny vokatra izahay, indrindra noho ny fiezahana amin'ny drafitra manodidina ny famotsorana ny Microsoft Flight Simulator ary ny fahatakarana izay azo atao. Rehefa afaka volana vitsivitsy, ary vokatra vitsivitsy hafa, tsapanay fa fotoana mety izao hananganana lisitr'ireo vokatra kasainay havoaka amin'ny manaraka ...
Verticalsim dia nanambara an'i Fayetteville ho an'ny fiaramanidina X
Te-hanambara ny tetikasako manaraka ho an'ny X-Plane 11! Fayetteville Regional Airport (KFAY), fantatra ihany koa amin'ny hoe Grannis Field, dia seranam-piaramanidina ho an'ny daholobe any Cumberland County, North Carolina, Etazonia. Any akaikin'ny tanànan'i Fayetteville, North Carolina. Manana seranam-piaramanidina roa ny seranam-piaramanidina ary seranan-tseranana misy seranana roa ho an'ny fiaramanidina ara-barotra ary fantsona iray hafa ho an'ny fivezivezin'ny sidina ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ny seranam-piaramanidina rezionaly Fayetteville dia tompoin'ny Delta Air Lines sy Delta Connection, ...
FlyByWire mamaly tsaho momba ny tetikasan'izy ireo A32NX
Tao amin'ny lahatsoratra Facebook vao haingana, FlyByWire Simulation dia nanome fanazavana momba ny tsaho momba ny tetikasan'izy ireo A32NX: Manolotra fanazavana vitsivitsy momba ny fanambarana vao haingana izahay. Ny tetikasa A32NX dia hijanona maimaimpoana sy loharano misokatra mandrakizay. Betsaka ny fanambarana diso momba ny zotram-piaramanidina lasa add-on payware, ary sary sandoka mampiseho ilay fiaramanidina mitentina 90 EUR eo amin'ny Marketplace. Tianay ny hanazava fa maimaimpoana ny fanolorana Marketplace, ary ...